Zvakanakisa zvigadzirwa zvekudyara mune yakatarwa uye inoshanduka mari | Ehupfumi Zvemari
Zvirokwazvo chimwe chezvishuwo zvako zvekudyara kutenga masheya muzvikwereti. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti haufanire kungozvimisikidza iwe kumusika wemasheya Panguva ino une zvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa izvo zvinokutendera iwe kuti uwane purofiti inobatsira. Kunyangwe muzviitiko zvakawanda pasi pechisimba zvikuru emamodeli ekudyara. Sezvazviri mune chaiyo kesi yemabherandi uye zvitupa zvakave nekuwedzera kukuru mukutengesa kwavo mugore rapfuura.
Sezvinoitikawo kune inonzi mari yekutsinhana-yakatengeswa mari (ETF), unova musanganiswa pakati pekutenga nekutengesa zvikamu pamusika wemari nemari yekudyara. Asi pamwe newakawedzerwa kukosha iwe waunogona tarisa zvimwe zvinhu zvemari, mamwe acho ane hunyanzvi. Pasina kuburitswa kwayo kuri kwakananga sekumwe misika yemari. Ndokunge, iwe unogona kuve nesimba rakakura pamusoro pezvinzvimbo zvavo kuti ubvise zvinzvimbo panguva yaunofunga yakakodzera.
Kune rimwe divi, mukati mekudyara hapana kana kushaikwa kwezvigadzirwa kubva pamusika wemari yakatarwa senge mabhiri, zvisungo uye zvisungo. Zvese izvo zvigadzirwa zvakabvumidzwa nevanodzivirira zvakanyanya vadiki nepakati varimi. Kunyangwe panguva ino kubatsirwa kwayo kunofanirwa kuverengerwa sekusagutse kune zvido zveva savers. Pasina kupa zvinopfuura 2%, kunyangwe zviine mukana wakakura kuti chiri chigadzirwa chisina makomisheni uye zvimwe mari zvinobva mukutungamira kana kuchengetedza kwayo.
1 Kuisa mari muzvikwereti: kutengesa
2 Kushanda mune zvigadzirwa zvemari
3 Mhedzisiro yemaneja wekutsinhana kwemasheya
4 Inotevera-chizvarwa mvumo
5 Mamwe mabasa ekudzivirira
6 Inodzosera pazasi pe2%
Kuisa mari muzvikwereti: kutengesa
Sipanish stock market yakatengesa 32.319 mamirioni euros mumari inoshanduka muna Kukadzi, 22% yakaderera pane muna Ndira uye 30,6% yakaderera pane iyo nhamba yemwedzi mumwecheteyo we2018. Nhamba yekutaurirana yaive 2,8 mamirioni, 21,8, 37% yakaderera pane yapfuura mwedzi uye 2018% yakaderera pane iya yakanyoreswa muna Kukadzi XNUMX. Muchikamu che magwaro uye zvitupa 24 mamirioni euros akakurukurwa, 31,8% pasi pemwedzi wapfuura uye 47,4% pasi peiyo nguva imwechete ye2018. Huwandu hwekutaurirana hwakamira pa5.826, 7,5% pazasi paNdira uye 36,4% yakaderera pane mumwedzi mumwe chete wegore rapfuura. . Huwandu hwenyaya dzakabvumidzwa mukutengesa hwaisvika 1.186, 108% kupfuura gore rapfuura.
Nezve chikamu chekuchinjana-chakatengeswa mari (ETF) chikamu, mamirioni zana nemakumi mairi emaeuro akatengeswa, 127% yakaderera pane mwedzi wapfuura uye 37,4% yakaderera pane iwo iwo mwedzi wegore rapfuura. Huwandu hwezvibvumirano muna Kukadzi hwakamira pa68,4, pasi 4.627% zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura uye 16,9% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete muna 64,5. Musika wemari wakatarwa wakachengetedza yakakwira chiitiko chikamu. Huwandu hwakazara hwakaunganidzwa mugore hwakakura ne77,9%, mushure mekutengesa 28.750 mamirioni euros mumwedzi wapfuura, 85,3% yakakwira kupfuura munaKukadzi 2018. Pamusoro pezvo, nyaya dzakabvumidzwa mukutengesa dzakawedzera ne7,8% kubvira pakutanga kwegore uye nemari yakasara yakawedzera ne2,9%.
Kushanda mune zvigadzirwa zvemari
Mumusika wekutora zvemari, kutengesa kwakawedzera ne3,9% mumwedzi miviri yekutanga yegore zvichienzaniswa nenguva imwechete yegore ra2018. Kuwedzera uku kwakanangana neramangwana rekuenzana, iro rakatumira kufambiswa kwe314,6%. Kutengesa muIbex makumi matatu nesarudzo kwakasimuka 35% mumwedzi. Nepo pane zvinopesana, iyo yakavhurika nzvimbo yeiyo seti yemari zvigadzirwa yakawedzera 7% zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura.
Muchikamu chino chekudyara kuSpain, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuwedzera kukuru kwakanyoreswa mune ramangwana uye sarudzo paIbex 35, nekufambira mberi kwe6,8% uye 16,5%, zvichiteerana. Ndichiri kune rimwe divi, iro ramangwana uye stock stock Ivo zvakare vaive nekukura mune ino nguva yakaongororwa mumisika yemari yenyika. Mune aya chaiwo kesi, 3,1% uye 6,6%, zvichiteerana.
Mhedzisiro yemaneja wekutsinhana kwemasheya
Bolsas y Mercados de España (BME) yakawana mambure mhedzisiro ye34,8 mamirioni euros mukota yechina ya2018, 6% yakaderera pane iyo inoenderana nenguva yakafanana yegore rapfuura. Iyo mhedzisiro mhedzisiro yegore ra2018 inosvika pamamirioni e136,3 emamiriyoni, 11,1% pasi peya2017. Iko mari yakazara mumakota echina yakasvika 78,8 mamirioni euros. Ivo vari 0,5% yakaderera pane iya yakawanikwa gore rapfuura, kunyangwe zvavo vachipa hunhu hwakanaka uchienzaniswa nekota mbiri dzakapfuura. Nezve kurovedza muviri seyakazara, iyo mambure mari yaisvika 304,2 miriyoni euros, kudzikira 4,9% zvine chekuita negore rapfuura.
Muchirevo chematanho akaderera kwazvo ekusagadzikana kusinganzwisisike (15% avhareji yezuva nezuva zvinoenderana ne VIBEX index, zvitatu zvegumi zvakaderera pane gore rapfuura) huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zvemari zvakatengeswa zvakamira pamakondirakiti emamirioni makumi mana nemakumi mashanu nemashanu muna43,5, kuderera kwe2018% zvichienzaniswa negore rapfuura. Muchikamu chechina, kutengeserana kwakaramba kwakadzikama zvichienzaniswa nenguva imwechete yegore rapfuura nemamiriyoni gumi nemaviri. Chibvumirano chenguva yemberi paIbex 2,4, chigadzirwa chine muganho wepamusoro muchikamu ichi, chakawedzera huwandu hwayo hwezvibvumirano zvakataurirana ne12,2% munguva yakaongororwa.
Icho chimwe chezvigadzirwa zvakachengetedza kuwedzera kwakanyanya mukutengesa munguva yakaongororwa. Imwe yemafomati ayo vashoma nevapakati varimi vanogona kubvumirana iri kuburikidza negoridhe. Mugore rapfuura, nyaya dzinoverengeka dzewarandi dzakatangwa pamusika dzinoratidza nekuti ivo kufukidzwa kwezvakasiyana siyana zviri pasi, Pakati payo pane yero simbi. Iri kirasi yezvigadzirwa zvemari zvinotsanangurwa seyakanyanya njodzi nevanoongorora zvemari sezvo maeuros mazhinji anogona kurasikirwa munzira munzira kuburikidza nenzvimbo dzawo.
Nekudaro, zvigadzirwa zvitsva zvemari zvakadaro zvinobvumidza vanoita mari kuti kuwana chaiyo misika. Chinhu icho neimwe nzira chaisakwanisa kuve chakaomeswa, ndoda muchikamu chakakosha chesimbi, mune ino kesi goridhe. Chero zvazvingava, iri imwe nzira nyowani yekuisa mari mune ino yefaimari kuitira kuti iwe utore mukana wenguva yakanaka iyo simbi yegoridhe iri kupfuura nayo. Nedzimwe dzakakurumbira kuongororwa mukati memwedzi gumi nembiri yekupedzisira. Mune izvo zvakagadziriswa seimwe yenzvimbo dzakachengeteka dzehunhu par kugona, kunyanya kupihwa kusagadzikana uye kusagadzikana kwemisika yemari.
Mamwe mabasa ekudzivirira
Mukati meiyo yakamisikidzwa mari musika pane iyo mabhiri, zvisungo uye zvisungo zvigadzirwa zvakabatwa zvakanyanya nevashambadzi vadiki nepakati. Zvese zvitatu zvinogadziriswa-zvemari zvigadzirwa zvinopa kudzikiswa uye kwakavimbiswa kudzoka gore rega uye izvo zvinoumba zviridzwa zvinoshandiswa neHurumende kuzvipa mari. Chero mugari anogona kuisa mari mune izvi kuchengetedzeka, zvine kukwikwidza kwekupa yakakwira kudzoka kupfuura zvakajairwa bhangi dhipoziti. Kunyangwe yavo yekudyidzana margins akadonha zvakanyanya mumakore apfuura.
Ehezve, chinonyanya kufarirwa uye chinozivikanwa chigadzirwa cheSpanish saver itsamba yeHurumende. Zvichienderana nehurefu hweichi chinhu, pane zvitatu zvinopihwa: tsamba ku mwedzi mitanhatu, gore rimwe nemwedzi gumi nesere. Pasina mubvunzo kukosha kwakachengeteka, nekuti mwero wekufarira wakatemwa. Kune izvi zvinowedzerwa kuti, kunyangwe iyo purofiti inopihwa isiri yakanyanya kukwirira, nguva yekudyara ipfupi. Izvi ndizvo zvikonzero nei yakawanda mari uye yakatarwa mari mutual mari inodyara mune izvi zvigadzirwa.
Inodzosera pazasi pe2%
Iyo yegore-bhiri ikozvino inopa kudzoka kwe1,1%. Chibereko chakakwirira kupfuura icho chinopihwa nevazhinji vanowanzoisa mabhengi, nekuti kazhinji mubhadharo wegore haupfuure 0,50%. Chero zvazvingaitika, chimwe chezvinhu zvinokwezva zveichi chinyakare chakamisikidzwa mari yechigadzirwa ndeyekuti haufanire kumirira kuti nguva ipere kuti utore kudzoka, sezvo mashandiro anoonekwa pamberi. Mupfungwa iyi, ma mechanics ayo akafanana chaizvo neari mabhengi ekuvimbisa ari.
Kune rimwe divi, ivo vari chikamu chemari yekudyara yevanodzivirira zvakanyanya kana vanochengetedza varimi. Iko kuchengetedzeka kwekuchengetedza kunonyanya kukuvadza kune kumwe kufunga kune hukasha. Sezvinei, usatarisira kushamisika kukuru yezvigadzirwa izvi, asi zvirinani iwe uchave uine vimbiso yekuti haungarasikirwe neyuro euro pane yakavhurika nzvimbo mune yakatarwa mari. Nezvakanakira kuti iwe unogona kunyange kusarudza iyo nguva yekudyara, iine akasiyana maroo esarudzo. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Ichi ndicho chimwe chezvipingaidzo izvo misika yemari yakatarwa yave nayo panguva ino uye zvinoita sekunge chiyero chayo chemari hachizokwira zvakanyanya mumwedzi iri kuuya. Asi, pane zvinopesana, ivo vanowanzo kudzikamisa. Mukati meiyo yakamisikidzwa mari musika pane iyo mabhiri, zvisungo uye zvisungo zvigadzirwa zvakabatwa zvakanyanya nevashambadzi vadiki nepakati. Zvese zvitatu zvinogadziriswa-zvemari zvigadzirwa zvinopa kudzikiswa uye kwakavimbiswa kudzoka gore rega uye izvo zvinoumba zviridzwa zvinoshandiswa neHurumende kuzvipa mari. Chero mugari anogona kuisa mari mune izvi kuchengetedzeka, zvine kukwikwidza kwekupa yakakwira kudzoka kupfuura zvakajairwa bhangi dhipoziti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvakanakisa zvigadzirwa zvekudyara mune yakatarwa uye inoshanduka mari